Zvinyorwa zvaBob Croft pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Bob Croft
Bob Croft chiitiko chemartech mutungamiri mudunhu reAPAC, achishanda nevatengi vanopfuura gumi nemashanu mumakore masere apfuura nguva kumaindasitiri mazhinji.
Chipiri, Zvita 8, 2020 Chitatu, December 30, 2020 Bob Croft
Kana zvasvika pakutumira maemail nekutanga mishandirapamwe yekutengesa email, yako IP chikamu chesangano, kana mukurumbira weIP, inonyanya kukosha. Iyo inozivikanwa zvakare seyokutumira mamaki, iyo IP mukurumbira inobata kuendesa email, uye izvi zvakakosha kumushandirapamwe weemail mushandirapamwe, pamwe nekutaurirana zvakanyanya. Muchikamu chino, tinoongorora IP zvikoro zvakadzama uye titarise maitiro aungaita yakasimba IP mukurumbira. Chii chinonzi IP Chikamu
Muvhuro, Mbudzi 30, 2020 Muvhuro, Mbudzi 30, 2020 Bob Croft
A yekushambadzira otomatiki chikuva (MAP) chero software iyo inogadzira kushambadzira zviitiko. Iwo mapuratifomu anowanzo kupa otomatiki maficha pane email, zvemagariro midhiya, lead gen, yakananga tsamba, yedhijitari kushambadzira chiteshi uye avo masvikiro. Iwo maturusi anopa epakati yekushambadzira dhatabhesi yeruzivo rwekushambadzira saka kutaurirana kunogona kutariswa uchishandisa kukamura uye kuita kwako pachako. Iko kune kudzoka kukuru kwekudyara kana kushambadzira otomatiki mapuratifomu akaitwa nemazvo uye zvakazara zvakasimbiswa; zvisinei, mabhizinesi mazhinji anoita zvikanganiso zvakanyanya